ယာယီနှင့် တစ်ခါသုံးဖုန်း ▷ အွန်လိုင်းနံပါတ်အသစ် sms လက်ခံရရှိသည် · နံပါတ်အသစ်ထည့်ထားသည် 10 မိနစ်က · ONLINE-SMS.ORG · 10 min number
ယာယီဖုန်းနံပါတ်အသစ်သို့ အခမဲ့ SMS လက်ခံရယူပါ။
ရရှိနိုင်ပါသည်။ 168 နံပါတ်များ. နံပါတ်အသစ်ကို ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော 33 မိနစ် က.
နိုင်ငံအားလုံး (168) ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (43) ယူအက်စ် (38) ရုရှား (7) နယ်သာလန် (6) ကနေဒါ (6) ပြင်သစ် (5) ယူကရိန်း (5) ဆွီဒင် (5) ဂျာမနီ (4) အိန္ဒိယ (4) စပိန် (4) ဖိလစ်ပိုင် (3) ပိုလန် (3) အစ် (3) သြစတြီးယား (2) ချက်သမ္မတနိုင်ငံ (2) ထိုင်း (2) ဖင်လန် (1) လစ်သူယေးနီးယား (1) လတ် (1) ဟောင်ကောင် SAR တရုတ် (1) မက္ကဆီကို (1) ဇတ် (1) ရိုမေးနီးယား (1) ယူဂန်ဒါ (1) ပွာတိုရီကို (1) ဂါနာ (1) အင်ဒိုနီးရှား (1) အီတလီ (1) မလေးရှား (1) အက်စ်တိုးနီးယား (1) မြန်မာ (မြန်မာ)၊ (1) ဘယ်လ်ဂျီယံ (1) ကြက်ဆင် (1) ပေါ်တူဂီ (1) မော် (1) အယ်လ်ဆာဗေဒို (1) တရုတ် (1) ဘရာဇီး (1) အိုင်ယာလန် (1) နိုင်ဂျီးရီးယား (1) သြစတြေးလျ (1) နယူးဇီလန် (1)
17583 လွန်ခဲ့သော စက္ကန်.အနည်းငယ် က
17645 လွန်ခဲ့သော2စက္ကန့် က
17106 လွန်ခဲ့သော 11 စက္ကန့် က
15438 လွန်ခဲ့သော 16 စက္ကန့် က
9115 လွန်ခဲ့သော 18 စက္ကန့် က
9188 လွန်ခဲ့သော 19 စက္ကန့် က
10498 လွန်ခဲ့သော 21 စက္ကန့် က
53170 လွန်ခဲ့သော 43 စက္ကန့် က
1635 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
5227 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
1716 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
5689 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
25950 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
25625 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
30863 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
29342 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
46933 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
44951 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
25567 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
19166 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
16194 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
16816 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
20120 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
19240 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
20380 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
15066 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
16418 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
20907 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
19246 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
14561 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
3032 လွန်ခဲ့သော3မိနစ် က
27785 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
27067 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
25715 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
16747 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
51071 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
14907 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
70523 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
106211 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
5972 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
7887 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
10914 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
4643 လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ် က
8726 လွန်ခဲ့သော စက္ကန်.အနည်းငယ် က
39579 လွန်ခဲ့သော5စက္ကန့် က
4031 လွန်ခဲ့သော 10 စက္ကန့် က
32579 လွန်ခဲ့သော 32 စက္ကန့် က
50325 လွန်ခဲ့သော 33 စက္ကန့် က
91163 လွန်ခဲ့သော 39 စက္ကန့် က
48300 လွန်ခဲ့သော 54 စက္ကန့် က
50664 လွန်ခဲ့သော 56 စက္ကန့် က
85662 လွန်ခဲ့သော 59 စက္ကန့် က
120152 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
9310 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
30035 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
20878 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
944 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
91533 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
19365 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
11543 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
13649 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
3464 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
6167 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
31914 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
84566 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
4732 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
47542 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
19169 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
678 လွန်ခဲ့သော3မိနစ် က
24815 လွန်ခဲ့သော3မိနစ် က
13487 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
25869 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
64536 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
11953 လွန်ခဲ့သော7မိနစ် က
61502 လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ် က
66808 လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ် က
60267 လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ် က
8849 လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ် က
2516 လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ် က
7552 လွန်ခဲ့သော9မိနစ် က
16412 လွန်ခဲ့သော 10 မိနစ် က
1716 လွန်ခဲ့သော 8 စက္ကန့် က
2039 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
2103 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
3199 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
1543 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
1841 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
1854 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
4759 လွန်ခဲ့သော3စက္ကန့် က
3639 လွန်ခဲ့သော 8 စက္ကန့် က
8466 လွန်ခဲ့သော 46 စက္ကန့် က
26103 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
12512 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
4214 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
107037 လွန်ခဲ့သော 48 စက္ကန့် က
32478 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
31300 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
982 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
2230 လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ် က
2424 လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ် က
3216 လွန်ခဲ့သော7စက္ကန့် က
297 လွန်ခဲ့သော 36 စက္ကန့် က
406 လွန်ခဲ့သော 42 စက္ကန့် က
458 လွန်ခဲ့သော 43 စက္ကန့် က
20504 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
29875 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
13366 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
21569 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
2692 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
3432 လွန်ခဲ့သော 8 မိနစ် က
1105 လွန်ခဲ့သော6စက္ကန့် က
583 လွန်ခဲ့သော9စက္ကန့် က
10628 လွန်ခဲ့သော 12 စက္ကန့် က
9091 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
719 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
20869 လွန်ခဲ့သော7စက္ကန့် က
7332 လွန်ခဲ့သော 29 စက္ကန့် က
11309 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
10596 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
10295 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
9057 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
7202 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
23393 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
24089 လွန်ခဲ့သော 10 စက္ကန့် က
49991 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
45808 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
3822 လွန်ခဲ့သော7မိနစ် က
12883 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
10513 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
3995 လွန်ခဲ့သော3မိနစ် က
1513 လွန်ခဲ့သော 55 စက္ကန့် က
14271 လွန်ခဲ့သော7မိနစ် က
37804 လွန်ခဲ့သော7မိနစ် က
12093 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
19280 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
7586 လွန်ခဲ့သော7မိနစ် က
63211 လွန်ခဲ့သော 51 စက္ကန့် က
10156 လွန်ခဲ့သော2မိနစ် က
9379 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
9386 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
3285 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
5077 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
1785 လွန်ခဲ့သော5စက္ကန့် က
580 လွန်ခဲ့သော 27 စက္ကန့် က
1168 လွန်ခဲ့သော4စက္ကန့် က
ဟောင်ကောင် SAR တရုတ်
12547 လွန်ခဲ့သော တစ်မိနစ် က
3114 လွန်ခဲ့သော2ပတ် က
687 လွန်ခဲ့သော3မိနစ် က
24821 လွန်ခဲ့သော3နာရီ က
405 လွန်ခဲ့သော 1 ပတ် က
589 လွန်ခဲ့သော4ရက် က
488 လွန်ခဲ့သော3ရက် က
8076 လွန်ခဲ့သော တစ်ရက် က
7844 လွန်ခဲ့သော 20 နာရီ က
14082 လွန်ခဲ့သော 19 နာရီ က
1978 လွန်ခဲ့သော 17 နာရီ က
8018 လွန်ခဲ့သော5နာရီ က
11975 လွန်ခဲ့သော2နာရီ က
1023 လွန်ခဲ့သော2ပတ် က
14924 လွန်ခဲ့သော2နာရီ က
839 လွန်ခဲ့သော 26 မိနစ် က
300 လွန်ခဲ့သော 17 မိနစ် က
7595 လွန်ခဲ့သော5မိနစ် က
5871 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
8084 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
7979 လွန်ခဲ့သော4မိနစ် က
71238 လွန်ခဲ့သော3မိနစ် က
5439 လွန်ခဲ့သော3မိနစ် က
မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ အွန်လိုင်း sms လက်ခံရယူရန် ယာယီဖုန်းနံပါတ်ကို ရယူပါ။
Online-sms.org သည် အွန်လိုင်းတွင် တစ်ခါသုံးနှင့် ယာယီဖုန်းနံပါတ်များအတွက် အခမဲ့ sms လက်ခံမှုကို ပေးပါသည်။ အဝင် sms အတွက် ငွေပေးချေခြင်း သို့မဟုတ် အကောင့်တစ်ခု မှတ်ပုံတင်ခြင်း မပြုဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်ဖုန်းများကို အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယာယီနံပါတ်များကို အသုံးပြု၍ အကောင့်အသစ်များကို မှတ်ပုံတင်ပါ။ WhatsApp၊ Google၊ Facebook၊ WeChat၊ Telegram၊ Viber၊ Line၊ KakaoTalk၊ Gmail နှင့် အခြားအရာများ ကဲ့သို့သော အက်ပ်နှင့် ဝဘ်ဆိုဒ် ၃၀၀ ကျော်မှ SMS အတည်ပြုကုဒ်ကို အခမဲ့ ရယူလိုက်ပါ။ အရမ်းကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ SMS လက်ခံရေးဆိုက်ကို သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေပါ။
အတု ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာဘာလဲ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းမ်ကတ်အစား၊ နံပါတ်ကို တိမ်တိုက် တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် အသုံးပြုခြင်း လုပ်စရာမလိုဘဲ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အွန်လိုင်း SMS ကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ နံပါတ်အတုတွင် sms လက်ခံရရှိရန် 1-10 မိနစ်စောင့်ဆိုင်းရန် လိုအပ်ပြီး sms ပြေစာ၏ အမြန်နှုန်းသည် ပေးပို့သူအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုဘိုင်းနံပါတ်များစာရင်းကို နေ့စဉ် အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။ အခမဲ့ sms အရေအတွက်ကိုယ်တိုင်က ၎င်းကို လူများစွာက တစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းကို သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုဘဲ sms လက်ခံရရှိခြင်းကို ရပ်ပြီးနောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်များအားလုံးကို တစ်ခါသုံး သို့မဟုတ် ယာယီနံပါတ်အဖြစ် ယူသင့်သည်။ နံပါတ်သည် "အော့ဖ်လိုင်း" ၏အခြေအနေသို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး မလှုပ်ရှားနိုင်သောနံပါတ်များသို့သွားပါမည်။ vostavtovat sms ဧည့်ခံမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ထို့ကြောင့် အရေးကြီးသောအကောင့်များကို စာရင်းသွင်းရန် ၎င်းတို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်သင်၏အကောင့်ကို sms ဖြင့်အတည်ပြုရန် sms ကိုလက်ခံရန်လိုအပ်သည်-
➊ အထက်တွင်ရရှိနိုင်သောနိုင်ငံများမှ နံပါတ်၏နိုင်ငံကို ရွေးပါ။
➋ အခမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းကို လိုအပ်သည့် ဝဘ်ဆိုက်တွင် သတ်မှတ်ပါ။
➌ နံပါတ်များကို နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်ထားသော နံပါတ်၏ ဝင်စာထဲသို့ ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။
ငွေပေးချေမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များမှလွဲ၍ ဆိုက်များအားလုံးမှ သင်အလိုရှိသလောက် စာတိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျာမနီ၊ သြစတြေးလျ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကိုရီးယား၊ မော်ရိုကို၊ အမေရိက၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ တူရကီ၊ ဆွီဒင်၊ ရုရှားတို့တွင် ယာယီနံပါတ်များ အခမဲ့ sms ဖြင့် လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ခုစီအတွက် ရရှိနိုင်သောနံပါတ်များ ပမာဏကို နိုင်ငံအမည်ပေါ်တွင် နှိပ်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သတိပြုရန်- စာမျက်နှာကို ပြန်လည်စတင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ မက်ဆေ့ဂျ်များအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့ဆာဗာပေါ်တွင် ရှိနေသည်နှင့် တပြိုင်နက် မက်ဆေ့ဂျ်များ ချက်ချင်းရောက်ရှိလာသည်။
ယာယီ သို့မဟုတ် တစ်ခါသုံး နံပါတ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
168 တစ်ခါသုံးဖုန်းနံပါတ်ကို ယာယီဖုန်းနံပါတ်အဖြစ် တရားဝင်လူသိများပြီး ဆိုလိုသည်မှာ နံပါတ်များသည် အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်း ၁၀ မိနစ်မှ ရက်အနည်းငယ်အထိ ရရှိနိုင်သည်။ ဖုန်းနံပါတ်များအားလုံးကို မျှဝေထားပြီး မည်သူမဆို အဝင်မက်ဆေ့ဂျ်များကို မြင်နိုင်ပါသည်။ အကောင့်များ၏ sms အတည်ပြုခြင်း၊ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များဖြင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးတွင် အကောင့်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ sms ဖြင့် စာသားလက်ခံခြင်း၊ အကောင့်များကို အတည်ပြုရန်အတွက် အခမဲ့အွန်လိုင်း ယာယီဖုန်းနံပါတ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖုန်းနံပါတ်အစစ်မပါဘဲ အကောင့်တစ်ခု စာရင်းသွင်းလိုပါက သီးသန့်ဖုန်းနံပါတ်များ အတုအယောင်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုရသည့် အခြားသော အကြောင်းအရင်းများမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် လူသစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း တို့ ပါဝင်ပါသည်။
အွန်လိုင်း-sms.org အတုအယောင်နံပါတ်များနှင့် အလုပ်လုပ်စဉ်တွင် အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်များ၊ ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဆိုက်များတွင် မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဖုန်းနံပါတ်များကို အသုံးပြုခွင့်မပြုကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ၎င်းတို့ထဲမှ အများအပြားကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူသည် အဆိုပါလိပ်စာများမှ မက်ဆေ့ချ်များကို လက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ တရားမ၀င်အစီအစဥ်တစ်ခုခုတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုတောင်းခံပါက အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို တောင်းဆိုပါက ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းအတည်ပြုနံပါတ်များသည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။
သင်၏ လျှို့ဝှက်ရေးသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယာယီဖုန်းနံပါတ်များဖြင့်၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို အတည်ပြုရန်လိုအပ်သည့် ဝဘ်ဆိုက်များတွင် သင့်ဖုန်းနံပါတ်အစစ်ကို ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
၎င်းသည် သင့်အား သင်၏အထောက်အထားကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် spam ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် မက်ဆေ့ချ်များကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်လိုအပ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် အွန်လိုင်း မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံမှုဖြင့် ဖုန်းနံပါတ်အတုများကို အခမဲ့ပေးပါသည်။ Online-sms.org သည် မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများနှင့် အလုပ်လုပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် sms နံပါတ်အသစ်များကို နေ့စဉ်ထည့်နိုင်သည်။
နံပါတ်များအားလုံးတွင် ငွေပေးချေမှုစနစ်များ၊ အခပေးစာရင်းသွင်းမှုများနှင့် အခြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ လက်ခံရရှိသည့် မက်ဆေ့ချ်များကို ပိတ်ဆို့သည့် အလိုအလျောက် စစ်ထုတ်မှုတစ်ခု ရှိသည်။
အပူချိန်နံပါတ်အသစ်လိုချင်ပါသလား။ ဤဆိုဒ်ကို မျှဝေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရေးပါ။
အတည်ပြုခြင်းအတွက် ယာယီနံပါတ်များသို့ sms ကို လက်ခံရယူပါ-: